China Vacuum RF manodina cellulite fanesorana tavy vela endrika mihena milina mpanamboatra sy mpamatsy | LaserTell
Vacuum RF mikodiadia cellulite fanesorana fanorana vela endrika mihena milina
Fohy fohy momba ny Plushape:
1. Ny laser tsy mitongilana dia mampihena ny fihenan'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fanamainana ny hoditra ary ny angovo RF dia miditra lalina ao anaty sela mpampifandray. Ny fitambarana synergistic an'ny laser infrared ary ny herin'ny RF dia mampitombo ny fiparitahan'ny oxygen intracellular amin'ny alàlan'ny fanafanana ny hoditra.
2. Ny fantsom-panafody miampy manipulateur namboarina manokana dia mitarika ny fidirana RF ho 5-15mm mihitsy. Mandritra izany fotoana izany, ny fantsom-bovoka sy ny fanodinkodinam-batana dia manaparitaka ny tavy mampifandray fibrillar, manimba tsara ny tavy subcutaneite ary koa ny capillary capillary extruded, mampitombo ny fivoahan'ny lymphatic, mampiroborobo ny metabolisma ary mampihena na mampihena ny haben'ny efitrano fatana ary nihatsara be vokan'ny contouring vatana.
3. Ny teknolojia velashape izay manafoana ny hoditra dia mahatonga ny angovo RF hiditra ao anaty hoditra voaforitra manokana, hanatsara be kokoa ny fiatraikany sy ny fiarovana, eny fa na dia ny fitsaboana ny faritra amin'ny hodi-maso ambony aza.
1.Velashape ampiarahana amin'ny bi-polar RF sy ny angovo IR; ny fantsom-bovoka dia mifamatotra amin'ireo roller mekanika
2.Ny RF sy ny IR dia miteraka hafanana, mampitombo ny atin'ny oxygen ao amin'ny sela hoditra.
3.Ny fantsom-baravarankely manokana dia mampitony ny hoditra ary mahatonga ny effet conduction hafanana tsaratsara kokoa.
4.Mampiakatra ny tahan'ny metabolika amin'ny fomba mandaitra izy io ary mampihena ny fanangonana tavy amin'ny alàlan'ny lalan-dra amin'ny lymphatic.
5. Mampitombo ny volavolan'ny hoditra io ary mahatonga ny hoditra ho malama sy marefo kokoa.
6.40K dia manana ny teknolojia mazava ho azy.
Famantarana ny plushape:
1. Boribory mainty manodidina ny fanesorana ny maso, miketrona manodidina ny fanatsarana ny maso ary fanatsarana paosy;
2.Mampiakatra ny hodi-maso ary manaisotra ketrona;
3. Fanarenana postpartum, fitomboan'ny vatana aorian'ny fiterahana;
4.Tavy mihoapampana, adiposialy ao an-toerana, fanalefahana tavy, fanamafisana ny hoditra (sandry, tongotra, soroka ary lamosina, kiraro an-tendrombohitra, vodin-tsambo, sns.);
5.Manala ny fanaintainan'ny vanin-taolana sy ny fitsaboana amin'ny vatana manontolo;
6. Fanatsarana ny marika.
Fampiharana an'ny Syneron Velashape:
1.Fahenan'ny vatana, famolavolana & famolavolana
2.Fampihenana ny sela
3. Fanamafisana ny hoditra
5. Fanorana mafana
6. Fitsaboana faritra velarana
Fanodinkodinana mekanika (Vacuum + mekanika fanorana):
a. Manentana ny fivezivezena ny lymphatic sy ny rà
b. Manamora ny hetsika fibroblast
c. Mampihena ny viscosity an'ny cluster sela matavy
d. Mampiroborobo ny vasodilation sy ny fihoaram-pefy oksizenina sy otrikaina
e. Mamela fanafanana amin'ny halaliny samy hafa
Fanafanana (angovo infrared + radio matetika):
a. Manatsara ny fivezivezen'ny rà ary mampitombo ny fisarahana oksizenina avy amin'ny oxyhemoglobin
c. Mampitombo ny metabolisman'ny sela matavy
d Manatsara ny firafitry ny hoditra
Efijery LCD 1) Display efijery: 12 ″ TFT Color Touch Screen2) Asehoy ny efijery handpieceq1: 2.4 ″
Asehoy ny efijery amin'ny tananana 2: 1.9 ″
Asehoy ny efijery amin'ny tananana tanana 3: 2.5 ″
Fomba fiasa Pulse
Pulsa sakany 0.5s-7.5s
Fanerena ratsy 1) Sarobidy tanteraka: 90kPa -25kPa (68.4cmHg - 19cmHg)2) Sanda mifandraika: 10kPa -75kPa (7.6cmHg - 57cmHg)
Fomba fiasa ho an'ny roller Karazany 2
Fanamarinana ny fiarovana Fotoana tena izy amin'ny Internet
RF matetika 1MHz
Ny hakitroky ny angovo RF Max: 60J / cm
Laser halavan'ny 940nm
Herin'ny laser MAX 20W
Isan'ny tanana 4
Faritra fitsaboana 4mmx7mm, 6mmx13mm, 8mmx25mm, 30mmx44mm, 40mmx66mm, 90mmx120mm
Herin'ny fidirana naoty 850VA
Fomba famatsiana herinaratra AC230V ± 10%, 50Hz ± 1Hz
Haben'ny fonosana 54 * 58 * 146cm CM
Iza no mety ho mpilatsaka hofidina?
Ny fitsaboana dia atolotra ho an'ireo marary ara-dalàna ka hatramin'ny be loatra izay mijaly amin'ny cellulite tsy dia tsara loatra ao amin'ny faritry ny valahana, manodidina
ny valahana, ny kibony, na ny rantsany ambany. Ho an'ny valiny voatsabo, ireo marary ireo dia tokony hanolo-tena ihany koa hitandrina ny fahasalamana
fomba fiainana. Ny mpitsabo mpitsabo dia manana ny fanapahan-kevitra farany amin'ny fisafidianana kandidà tsara indrindra amin'ny fitsaboana.
Firy ny fitsaboana ilaina?
Ho an'ny vatana sy rantsam-batana, fitsaboana 8-10 isaky ny fotoam-pivoriana, 4-5 andro isaky ny fitsaboana iray, 30 minitra isaky ny fitsaboana.
Ho an'ny tarehy, fitsaboana 10 isaky ny fivoriana, indray mandeha isan-kerinandro, 15-20 minitra isaky ny fitsaboana.
Ho an'ny kentrona amin'ny maso, fitsaboana 10 isaky ny fivoriana, indray mandeha isan-kerinandro, 15 minitra isaky ny fitsaboana.
Haharitra hafiriana ny valiny?
Manoro hevitra ny fitsaboana 10 izahay isaky ny fotoam-pivoriana, hisy fanatsarana hafa isaky ny fitsaboana tsirairay. Mety haharitra vitsivitsy ny valiny
taona arakaraka ny taonany, ny fomba fiainany ary ny fiovan'ny hormonina, ny fivoriana fikojakojana dia asaina manitatra ny vokatry ny valiny,
manolo-kevitra izahay isam-bolana aorian'ny nahazoana ny vokatra tadiavina. Ny 1-5cm dia hahena amin'ny feny, 2-6cm amin'ny kibony ary ny andilana.
Inona avy ireo fanoherana?
Tsy misy contraindications lehibe ho an'ny fitsaboana. Ho an'ireo marary manana pacemaker / defibrillator, bevohoka na mitaiza na mafy
olana ara-pahasalamana dia asaina manatona ny dokotera alohan'ny hanombohana fitsaboana.
Fitsaboana taloha & Aorian'ny
Previous: Cavitation vao haingana + RF + Vacuum Slimming Machine Body Therapy Machine Velashape
Manaraka: 2019 Famolavolana farany farany Shina fikatsoana fantsona CO2 Laser Machine
2020 fananganana vaovao tsy fanatanjahan-tena fanamafisana m ...
Ny halavan'ny triple 755 808 1064 diode volo laser ...
Fivarotana mafana ny vidin'ny orinasa APT SHR IPL fanesorana volo ...
Masinina fanesorana tombokavatsa laser kely azo entina
Korea Aquasure H2 O2 Water Bubble Aqua tarehy d ...
Vokatra asongadina, Sitemap, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, Jiro Flash Ipl Xenon, Laser Module 808, Laser Epilator Ipl, 3 amin'ny 1 Ipl, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina